सुरु बच्चा र बच्चा पोषण र केयर फलो-मा दूध
अगस्ट 27, 2017
जब यो बच्चाहरु लाई खाने को लागी, आमा को दूध सबै भन्दा राम्रो छ। यो जीवनको छैटौं महिना सम्म उडाउनु पर्छ। छैटौं महिनादेखि मासु खानाको साथ, स्तनपान गर्न पछि लाग्न सक्छ। यद्यपि, हरेक आमा सम्भव छैन। यस्तो अवस्थामाका लागि वैकल्पिक खाना विकास गरिएको थियो।
1 यदि स्तनपानले काम गर्दैन
2 एचए - एलर्जी-प्रलोन बच्चाहरूको लागि खाना
3 एक उपयोगी पूरक को रूप मा folgemilch?
4 प्रारम्भिक दूधको गाईको दूधबाट
5 मिथकहरू दूध र सुतिरहेका छन्
6 1ER, 2ER, र 3ER Folgemilch
7 Folgemilch को सामाग्री
8 सानो प्रिन्ट
9 Folgemilch विशेषज्ञहरु द्वारा सिफारिश छैन
10 बच्चाहरु को जंगल मा अधिभार - अभिविन्यास को लागि एक सहायता
11 Folgemilch को हानिकारक
यदि स्तनपानले काम गर्दैन
बच्चाले स्तनपान नगर्ने थुप्रै कारणहरू छन्। त्यस्ता परिस्थितिहरुमा बच्चाहरु लाई एक वैकल्पिक दूध बन्छ। यो प्रारम्भिक खाना पनि पूर्व-खाना भनिन्छ। यो जन्म देखि उपयुक्त छ र बच्चाहरु को अपरिचित बहादुरी पथ मा पुरा तरिकाले अनुकूल छ। यो शिशु सूत्र लगातार विकसित र अनुकूलित छ। केहि समय को लागी प्रो - र प्रीबाइबिक्स पूर्व - भोजन मा थपएको छ, तर सबै निर्माताहरु द्वारा नहीं। यसले एक परिपक्व आंत फ्लोराको निर्माण गर्न र प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउँदछ। यो अझै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन।
एचए - एलर्जी-प्रलोन बच्चाहरूको लागि खाना
यदि बहिनीहरू वा अभिभावकहरू पहिले नै एलर्जीबाट पीडित हुन्छन् भने, यो स्तनपान छैन यदि एचए फीडको साथ बच्चालाई खाना बनाउन उपयोगी छ। संक्षिप्त नाम HA hypoallergenic भोजन को लागि खडा छ। गाईको दूध प्रोटीन घटक एचए खानामा थप विभाजित हुन्छ। यो विदेशी प्रोटीनको रूपमा मान्यता छैन। अपघटनको नतिजाको रूपमा, भोजन केहि हद सम्म कचौरामा स्वाद गर्दछ। एक नियमको रूपमा, तथापि, खाना शुरु हुने बेलामा कुनै समस्या छैन। हाइपोलार्गेनिक भोजन पनि को रूप मा उपलब्ध छ फलो-मा दूध, जुन कस्मेटिक युगमा दिइन्छ। के यसले एलर्जी रोकथाममा प्रभाव पारेको छ अहिलेसम्म वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गरिएको छैन।
मर्न फलो-मा दूध एक उपयोगी पूरक को रूप मा?
बच्चा बढ्छ र तीव्रता हप्तादेखि हप्तासम्म बढ्दै जान्छ। चार देखि छ महिना सम्म बच्चा बच्चाको उमेरमा छ। खानाको माध्यमबाट धेरै पोषक तत्व र ऊर्जा अवशोषित हुनुपर्छ। प्रायः आमाबाबुले आफैलाई धेरै समय सोध्छन्। एउटा प्रश्न हो कि यो प्रश्न हो फलो-मा दूध, आमाबाबुले बच्चालाई राम्रोसँग सुत्न चाहन्छन् र राम्रो खाना खान्छ। किनभने फलो-मा दूध स्टार्चले यी प्राकृतिक रूपमा पूर्व-भोजन भन्दा राम्रो समावेश गर्दछ। अक्सर फलो-मा दूध तर मल्ट्रोरोडट्रिनन या सुक्र्रोस, जुन चिनियाँ भन्दा बढी छैन। खनिज र प्रोटीन सामग्री यो प्रारम्भिक दूध भन्दा भन्दा उच्च छ। यो तथापि आवश्यक खाने दूध, पर्याप्त रूपमा भोजनको लागि आवश्यक थियो।
प्रारम्भिक दूधको गाईको दूधबाट
मूलतया, प्रारम्भिक दूधबाट एक परिवर्तन, माथि फलो-मा दूध - 2er वा 3ER खाना, आवश्यक छैन। पूर्व खाना पनि Beikostalter मा पारित गर्न सकिन्छ। धेरै आमाबाबु चाँडै बलियो हुँदै छन्, तथापि, यदि पूर्व-खानाले रातमा धेरै पटक अनुरोध गरेको छ। यदि बच्चा पनि दिनभरि धेरै र अधिक खाना, त्यसपछि परिवर्तन फलो-मा दूध विचार गरौं। तथापि, तथापि, यो एक वर्ष को उमेर मा गाय को दूध को परिवर्तन सम्म पूर्व - खाना को प्रस्ताव गर्न संभव छ।
मिथकहरू दूध र सुतिरहेका छन्
धेरै आमाबाबुले मानिन्छ कि यो दूध आहारसँग सम्बन्धित छ, चाहे बच्चा सुत्न सक्दछ। यद्यपि, निद्रा केवल दूध आपूर्तिसँग सम्बन्धित छैन। को फलो-मा दूध यद्यपि यो अधिक शक्ति समावेश गर्दछ, जसलाई यसले अधिक संतृप्त बनाउँछ फलो-मा दूध निस्सन्देह, निद्रा समस्याहरु बाट पीडित। निद्रा समस्याहरू मात्र खानामा निर्भर हुँदैन। यदि आमाबाबु बेपरहित छन् भने यो बच्चा पनि हो। यसबाहेक, सबै अनुभवहरू राती रातको दिन काम गर्छन्। यदि धेरै दिन भयो भने, बच्चा रातमा बेकार छ। बच्चाहरु को निद्रा र दांतहरु को नींद को समस्याहरु को सम्भावित कारणहरु पनि छन्। धेरै पटक आमाबाबु अझै पनि आक्रमण गर्दै छन् फलो-मा दूध, हेरचाह लिनु पर्छ कि यो धेरै चाँडो छैन। सबै पछि, फलो-मा दूध केवल जीवनको छैटौं महिना सम्म। चौथो महिनामा बच्चाहरू अझै खनिजहरू र प्रोटीनहरू प्रशोधन गर्न सक्षम छैनन् फलो-मा दूध आउँदैन। बरु, यसले बच्चालाई दबाब दिनेछ र स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नेछ, जस्तै गुर्दे धेरै उच्च छन्।
1er, 2er, र 3ER- फलो-मा दूध
यदि व्यापारमा आमाबाबुले पूर्ण अलमल्याउन अगाडि खडा हुन्छ भने यो अतिबर्धन गर्न सजिलो छ। विभिन्न निर्माताहरूले विभिन्न खानाहरू प्रस्ताव गर्छन्। छनौट राम्रो छ। पूर्व भोजन को अतिरिक्त, त्यहाँ पनि छ फलो-मा दूध, जुन 1er, 2er, र 3er को रूपमा प्राप्त गरिने छ। प्याकेजिङ्ग अनुसार प्याकेजिंग saturates फलो-मा दूध बच्चाहरु लाई राम्रो र एक राम्रो नींद मा योगदान गर्नु पर्छ, किनकी उनि माल्टेडप्पाइनिन, माल्टोस, वा स्टार्च हुन्छ। पूर्व - खाना र 1er - फलो-मा दूध ऊर्जा सामग्रीमा धेरै कम भिन्न भयो। तिनीहरू आवश्यक भए पूरै पूरै गर्न सकिन्छ। प्याकेजिङ्मा सधैँ एउटा सूची हो जुन आमाबाबुले कडा रूपमा। यद्यपि, यो आवश्यक छैन, किनभने प्रत्येक बच्चा फरक छ। भोजन को मात्रा र आवृत्ति बच्चा द्वारा निर्धारण गरिन्छ। प्रदान गरिएको जानकारी केवल दिशानिर्देशहरू हो। यसैले यो भोका र संतृप्तिको लागि संकेतहरू जान्न महत्त्वपूर्ण छ।
को सामग्री फलो-मा दूध
पहिले नै उल्लेख गरिएको छ फलो-मा दूध थप बल। यसले दूधको थोपा लामो समयसम्म पेटमा राख्छ, जसले खाना बीचको अन्तराल बढाउँछ। एक थप थप चीनी, जुन समावेश गर्दछ फलो-मा दूध थोरै मीठो तपाईलाई ध्यान दिनुपर्छ कि फलो-मा दूध कुनै चिसो थपिएको छैन। लेबलमा एक नजर यहाँ उपयोगी हुन सक्छ। ग्लुकोज र माल्टोस मा पाइन्छ फलो-मा दूध हेर्न को लागी केहि पनि छैन। एक कारण किन 1er खाना अक्सर परिवर्तन गरिएको छ सस्ता मूल्य। 1er को अतिरिक्त - त्यहाँ 2er र 3er पनि छ - फलो-मा दूध, तथापि, तपाईले आफैलाई 1er वा 2ER आहारमा सीमित गर्नु पर्छ किनभने 3er आहारले धेरै स्टार्च र चिनो, तर धेरै सानो क्यालियम समावेश गर्दछ।
विशेष गरी जब बच्चाहरु रात को समयमा अधिक बार उठते हो, आमाबाबुहरु को पूर्व भोजन को पोषण को मूल्य मा संदेह छ, खासकर किनकि उनि पूर्व - भोजन को तुलना गर्दै छन् फलो-मा दूध यति पतला देखिन्छ। यद्यपि, यो प्रयोग गर्न आवश्यक छैन फलो-मा दूध रूपान्तरण। समस्याग्रस्त रातहरूको लागि थुप्रै कारण हुन सक्छ। भोक शायद नै छोटो कारण हो, बच्चा बाहेक बढ्दो वृद्धिमा छ। यदि तपाईंले प्याकेजिङ्गमा सानो छाप हेर्न सक्नुहुन्छ फलो-मा दूध , त्यसपछि तपाई निश्चित रूपमा सूचना दिनुहुनेछ कि यो तपाईंको लागि उपयोगी छैन फलो-मा दूध रूपान्तरण। धेरै अन्वेषणहरूले स्वास्थ्य जोखिमहरू पनि सिर्जना गर्न सक्दछन्, किनभने फलो-मा दूध कम राम्रो तरिकाले आमाको दूधको पोषक तत्व संरचनामा अनुकूल छ। को प्रोटिन संरचना र प्रोटिन सामग्री वृद्धि भएको छ, तर क्यालोरी को कुल संख्या लगभग पूर्व को कि रूपमा ठूलो छ हुनत - खाना। तथापि, बच्चाहरु प्रोटीन सामग्री मा निर्भर छैनन्। यस मामला मा तीव्र मस्तिष्क वृद्धि को सम्बन्ध मा विभिन्न पोषक तत्व रचनाहरूको महत्त्वपूर्ण छ हो। प्रोटिनको वृद्धि सेवन पनि यस्तो मोटोपना रूपमा लेट प्रभाव, entail सक्छ। को फलो-मा दूध यसैले मात्र आहारको पूरकको रूपमा पेश गरिन सक्छ, तर आमाको दूधको लागि विकल्पको रूपमा।
फलो-मा दूध विशेषज्ञहरु द्वारा सिफारिस गरिएको छैन
पोषण विशेषज्ञहरू फलो-मा दूध पोषण फिलोलोजी, को लागि कुनै सिफारिश छैन फलो-मा दूध , किनकि यसले अवांछनीय additives समावेश गर्दछ र ढिलाइ तिरस्कार गर्न सक्छ। अन्तमा, तथापि, अभिभावकले निर्णय गर्नुपर्छ कि उनीहरूलाई फलो-मा दूध पूरक प्रयोग।
बच्चाहरु को जंगल मा अधिभार - अभिविन्यास को लागि एक सहायता
गर्न फलो-मा दूध सबैको आफ्नै आफ्नै विचार छ। तथापि, तथापि, यसले धेरै अनावश्यक additives समावेश गर्दछ, जसले बच्चालाई लामो समयसम्म मद्दत गर्दैन। Babydoll जंगल को एक सानो सिंहावलोकन प्रदान गर्न, यहाँ अभिविन्यासको एक संक्षिप्त सारांश हो।
प्रारम्भिक दूध, वा आमाको दूध विकल्प, पूर्व-खाना हो। यो जन्मबाट फेड हुन सक्छ गायको दूधको परिवर्तनमा।
- उच्च एलर्जी को जोखिम संग शिशुहरु लाई एचए आहार प्राप्त गर्नु पर्छ। त्यसपछि पारंपरिक पूर्व-खाना सजिलै परिमार्जन गर्न सकिन्छ।
- प्रारम्भिक दूध र 1ER-फलो-मा दूध बच्चाको खाँचो अनुसार तौलिएका छन्।
- अर्को फलो-मा दूध, 2er वा 3ER आवश्यक छैन। यदि यो मा आमाबाबु हो फलो-मा दूध बचाउनु पर्छ, यो सुनिश्चित गर्न को लागी हेरचाह गर्नुपर्छ कि फोलमेमेचले सम्भवतः केहि अनावश्यक समाविष्ट हुन्छन्। यसको अतिरिक्त, फलो-मा दूध सिफारिस अनुसार मात्र तर्नु पर्छ। बच्चा कम से कम छ महिना मा हुनु पर्छ।
- यदि तपाइँ अझै पनि अनिश्चित हुनुहुन्छ भने, सहायताको लागि आफ्नो डेलिभिजनलाई सोध्नुहोस्। यी को लागत स्वास्थ्य बीमा कोष को द्वारा नौवहन महिना को अन्त सम्म सम्म ले लिया जाता छ, सम्म सम्म आठ वार्ता / परामर्श।
को हानि फलो-मा दूध
यो एक हुन सक्छ फलो-मा दूध बच्चाको स्वस्थ आहारको लागि कुनै महत्त्व छैन। बच्चाहरु लाई पूर्व - खाना संग फीड को लागि पर्याप्त छ, जो एक वर्ष को उमेर मा गाय को दूध द्वारा प्रतिस्थापित गर्न सकिन्छ। को फलो-मा दूध हानि छ कि यो पाचन प्रणालीमा बोझ हो र दीर्घकालीन अवधिमा पनि परिवर्तन भएको चयापचय हुन्छ। यसको अतिरिक्त, यो अक्सर प्रयोग मा अधिक वजन हुन सक्छ।
अर्को लेखबेबी वाहक